Semalt: Iyona Ncedo Eyona Ncedo Eyona Ncokolayo Yokwenza I-Internet Idatha
khipha ulwazi kumaphepha ewebhu akhona. Ziluncedo kuwo wonke umntu ozama ukuqokelela idatha efunekayo kwiWebhu Yehlabathi. Ezi software zikhangelelana ngokutsha ngokuzenzekelayo okanye ngokuzenzekelayo, ukulandelelana kwedatha entsha okanye ekhoyo kwaye uyigcine ukufikelela kwakho. Ngokomzekelo, ezinye iinkqubo ze-web scraping zenzelwe ukuqokelela ulwazi malunga nemveliso evela eBay nase-Amazon. Bayasinceda sihlale siqonda izinto ezenzekayo kwiimarike.
Iilwimi eziphambili ze-Scraping Tools
Makhe sijonge uluhlu lwezinto ezifanelekileyo ze-web scraping zixhobo kwi-intanethi:
( 11) iDexi.io isekela ukuqokelelwa kwedatha kwiindawo ezininzi kwaye ayifuni ukukhuphela. Kuthetha ukuba ufuna nje ukuvula iwebhusayithi yayo esemthethweni kwaye uqalise ngedatha yakho yedatha. Esi sixhobo siza kunye nomhleli-based-based editor, kwaye idatha ingagcinwa kwiGoogle Drive kunye neBhokisi.net.
I-Scrapinghub yinkqubo yokukhishwa kwedatha enamandla eyenza i-intanethi kunye nabaprogram bathathe idatha ebalulekileyo. Le nkqubo isebenzisa i-proxy encinci i-rotator ebizwa ngokuba yi-Crawlera, enceda ukunqanda inani elikhulu lewebhu ezikhuselweyo nge-bot..
I-VisualScraper ihlose ukutshintshisa idatha ngendlela yesicatshulwa kunye nemifanekiso; le nkqubo ingasetyenziselwa ukuqokelela ulwazi oluvela kumabini asemgangathweni nakwiiwebhu eziphambili. Unokuqokelela kalula, ukulawula nokuhlela idatha yakho yewebhu kunye nomsebenzisi-friendly interface.
U-Spinn3r unceda uxwebhu olufanayo olufana nelo lweGoogle kwaye ulondoloza idatha yakho ekhishwe kwiifayile ze-JSON. Le web scraper izakuhlola rhoqo iiwebhusayithi kwaye zifumane izibuyekezo ezivela kwimithombo eyahlukeneyo ukufumana iimpapasho zexesha langempela kuwe.
ama-80legs iyincedo lomnatha, onamandla kwaye oguquguqukayo wewebhu kunye ne-extractor. Ungayilungisa le program njengemfuno yakho njengoko ithatha inani elikhulu lwedatha kwangoko.
I-scraper isandiso esidumileyo se-Chrome kunye nezinto ezininzi. Ngaphezu koko, kulungile ukuthumela idatha kwiGoogle Drive kwaye iluncedo kubini abangabinkqubo kunye nabaprogram. Esi sixhobo samahhala senze ngokuzenzekelayo ii-XPath ezincinci kwii-URL zakho.
I-Out Hub yona isandiso esilumkileyo seFoolfox eneenkcukacha ezininzi zokukhutshwa kwedatha. Ikunceda lula ukukhangela kwiwebhu kwaye sinokugqithisa kumaphepha ewebhu ngokuzenzekelayo, ukugcina ixabiso elikhulu lwedata nganye ngeyure.
Ngenisa i-Import.io inikezela ukwenza iifasethi ezithile ngokungenisa ulwazi olusuka kumaphepha athile ewebhu uze ulithumele kwiifayile ze-CSV. Le nkqubo isebenzisa iteknoloji yokukhawulela kwaye ilandele izigidi zedatha imihla ngemihla.